टीकापुर घटनामा दिवंगत प्रहरी निरीक्षकका छोराछोरीको प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र « प्रशासन
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट राज्यको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थरुहट पक्षधरको आक्रमणबाट टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ प्रहरी र एक डेढ वर्षे नावालकको ज्यान गएको थियो ।
उनीहरुको हत्याको अभियोगमा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक तथा थारू कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी, मधेसी अधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण चौधरीलगायत ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कैलालीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको छ। धनीरामसहित ३२ जना फरार छन् भने २४ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका फरार रेशम चौधरीले केही दिन पहिले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् । उनी फागुन २० गतेदेखि धनगढी कारागारमा सपथग्रहण गर्न पाउनु पर्ने भन्दै अनशन बसेका थिए ।
स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको भन्दै स्थानीय प्रशासनद्धारा काठमाडौं रिफर गरिएका चौधरीलाई उनी उपचाररत बीर अस्पतालमै पुगेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले जुस खुवाउँदै अनसन तोडाएका थिए । यससँगै चौधरीलाई जेलभित्रै सांसद पदको शपथग्रहण गराउने समाचारहरु आइरहँदा पीडित परिवारमा चिन्ता छाएको छ । सोही घटनामा ज्यानगुमाएका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टकी छोरी वसन्ती विष्टले न्यायका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको आग्रह यस्तो छ ।
सर्वप्रथम अत्यधिक बहुमतले प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा बधाई छ । आज तपाई प्रधानमन्त्री भएको करिब एक महिनापछि हामी चार भाईबहिनी तपाईंलाई एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।
तपाईले पत्रपत्रिकाबाट पक्कै पनि खबर सुन्नुभएको हुनुपर्छ, २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित ५ जना प्रहरी र २ जना सशस्त्र प्रहरीको हत्या भएको थियो । त्यही घटनामा एकजना डेढ वर्षे नाबालकले समेत अकाल ज्यान गुमाउनु पर्यो । सोही घटनामा हामिलार्इ संसार देखाउने, धेरै माया गर्नुहुने हाम्रा बाबा प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टको पनि हत्या गरिएको थियो ।
हामीलाई राजनीति र यस्ता अरूकुराबारे केही थाहा थिएन पहिले, अहिले पनि त्यसबारे धेरै चासो त राख्दैनौँ । जब कर्तव्यपालनका सिलसिलामा आपराधिक समूहद्वारा प्रहरीको निर्मम हत्या गरियो, हाम्री आमाको सिन्दुर पुछियो र हामीलाई टुहुरा बनाइयो– हामी यति विक्षिप्त भयौँ कि कयौँ दिनसम्म हामीलार्इ केहीथाहा भएन, के भइरहेको छ । भनौँ न हामी अँध्यारो सुरुङभित्र पसेझैँ भयौँ । केही पनि देखेनौँ अगाडिको बाटो ।
निकैपछि मात्रै थाहा भयो– हाम्रा बुबालाई आन्दोलनकारीले हत्या गरेका रहेछन्, उहाँका सहकर्मीहरुसँगै । देश र जनताको सुरक्षमा खटिएका प्रहरीलाई भाला बन्जरोले हानेर मारे त कतिलार्इ जीउँदै जलाइयो भनेर सुनेपछि उत्पन्न मुटुको जलन अहिलेसम्म सेलाएको छैन ।
त्यतिबेला सरकार र सबै पक्षबाट धेरै सान्त्वना प्राप्त भयो । हामीलाई टुहुरा बनाउने अपराधीहरूलाई कारवाही हुने र उनीहरू जेल जानेपछि राहत मिलेको अनुभूत भएको थियो हामीलाई ।
त्यो अपराधमा संलग्नहरूको नाम समेत खुलेपछि र घटनामा संलग्न केहीपक्राउ परेपछि हामीमा आशा अङ्कुरण भएकै हो– ढिलोचाँडो न्याय पाउँछौँ । पिताको आत्माले शान्ति पाउने भयो अब ।
तर हाम्रो आशा सत्य सावित कहाँ हुन्थ्यो र ? अभियुक्तहरूमध्ये धेरै जना पक्राउ नै परेनन । त्यसपछि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई कारवाही गरेर न्याय दिलाउने आश्वासन त बाँडे तर अदालतको कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा कसैले भारतमा लुकेर बसेका मुख्य अभियुक्तलाई नै सार्वजनिक स्थलमै भेटेर हाम्रो घाउमा नुनचूक दले ।
हामीले समाचारमा सुनेका छौँ र छानबिन समितिले छानबिन गरे अनुसार हाम्रा पितालार्इ मार्न मुख्य योजना बनाउने मध्येको प्रमुख मान्छेले तपाईंले जस्तै भोट पाएर चुनाव जितेको छ रे ?
त्यसरी घरघर भोट माग्न जाँदापनि पुलिसले किन पक्राउ गरेन ? आज हामी यो मात्र हैन हामी धेरै प्रश्न गर्न चाहन्छौँ तपाईंलाई । अनि त्यसरी अभियुक्त मान्छेलार्इ बचाउन किन खोजिरहनुभएको छ ? उसलार्इ पनि सरकारको मन्त्री बनाउन खोज्नुभएको हो कि ? अपराधीलाई सांसद् प्रहरी बनाएर कस्तो सुशासनको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईं ?
प्रधानमन्त्री ज्यू हामी हाम्रो पिता नभएको परिवारमा कसरी बसेका छौँ ? बुबा नहुनेले समाजले हामिलार्इ हेर्ने नजर कस्तो छ ? यो तपाईं सोच्न पनि सक्नुहुन्न । तपाईं या अरू कसैले पनि हाम्रा दिवंगत पिता फिर्ता ल्याइदिन त सक्नुहुन्न तर हामीलाई टुहुरो बनाउने ती अपराधीहरूलाई सजाय दिएर हामीलाई न्याय दिन त सक्न सक्नुहुन्छ नि ।
सरकारले हत्या–आरोपमा खोजी गरिरहेको मान्छेलाई राजनीतिको आवरणमा जोगाएर कसैले उसलाई जोगाउन चाहन्छ भने भगवानले उसलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनन् । अझै पनि न्यायको आशा छ । त्यो नरसंहारको एकजना मुख्य अभियुक्त अझै पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छ रे । कुनैपनि बाहनामा उसलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको हामीलाई थप अन्याय गर्नु हो । यसरी पीडितको घाउमा नुनचुक लगाउनुले हामीले राज्यबाट के आशा गर्ने
हाम्रा निर्दोष बुबाको छातीमा भाला र गोली प्रहार गर्ने/गर्न लगाउनेलाई कारवाही भएन भनेपीडित परिवारमाथि घोर अन्याय हुनेछ । हामी न त आरामले सुत्न सक्ने छौँ, न त मनमा शान्ति नै हुनेछ । न्याय पाइएन भने शायद टीकापुर घटनाको नियति दोहरिनेछ र हामी जस्तै अरूले पनि टुहुरो हुनु पर्नेछ ।
यही थिति बसाल्ने हो र यसैका लागि तपाईंको आफ्नो पनि आजन्म संघर्ष थियो भने हामी असहायको भन्नु केही छैन । अहिले अपराधीका गोहीका आँसु र उसको राजनीतिको पाखण्डले तपाईं गल्नुहुन्छ भने तपाईंको अभिवावकत्वमा रहेको राज्यले के अनभूति गर्ने ? अपराधीहरुले हामीबाट हाम्रा बुवा गुमाएको लामो समय भईसक्दा पनि चौबिसै घण्टा आँसुु बगाइरहेका छौँ, हामीले के आशा गर्ने ? हाम्रो आँसुको पनि मूल्य छ र निष्ठा–नैतीकताको पनि स्थान हुन्छ भने तुरुन्तै टीकापुर घटनाको योजना बुन्ने र हाम्रा पिताको विभत्स हत्या गर्नेलाई आजन्म कारावासको सजाय होस् ।
प्रधानमन्त्र ज्यू , यो पत्र तपाईसम्म त पुग्छ पुग्दैन । हामी राजनीति र समाचार जान्ने/बुझ्ने अवस्थाका पनि छैनौँ । यी शब्दहरु हाम्रा आँसु आशा दुवै हुन् । सम्माननीयज्यूलाई हामी धन्यवाद भनेर यसरी नै पत्र लेख्नेछौँ, जुन दिन हामी न्याय पाएको अनुभुति गर्नेछौँ । धन्यवाद ।
स्वर्गीय पिताको स्मृति र न्यायको आशमा रहेकि छोरी : वसन्ती विष्ट